Magaala Sioux city naannowa metro kessati sababa covid-19 namni 3 dabalataan du’uun himame | KWIT
Kutaa Iowa kessatti namni 6 dabalataan du’uufi namni 400 haarawa qabamuu guyyaa wiyxata gabaafame. Kunis kan mulisuu waliigalati namni qabame 12,300 ol yoo ta’u kan du’e nama 271 gahee jira.
Iowa governor Kim Reynolds akka jetteti erga torbaan tarte keessa dalayduun itti aana president Mike Pence’s coronavirus akka qabamte beekan booda of eegano guddaa akka gochu qabdu dubate. Reynolds Harba tarte white House dhaayxe turte. Guyyaa lama booda ammo itti anaan president Pence Iowa dhufee.
Reynolds virus kan hin qabnee fi fayya guutu kan qabduudha ganama kanaa himte.
Reynolds “guyya murasaaf offi qorranno gotti” kun kan akka hoo’i qaama isii laalu, akkasumas hojjatooni isii irra gariin manara hojattan.
Governor akka jetteti namni virus qabame 80% dhukubi xiqqoma fi malatto kan hin mul’isnedha.
Akka isiin jetteti Test Iowa magaala sioux city keessati ittuma fufaa. Bakki biraas kan qoranno campus Iowa Tech community college keessati kan ta’uudha. Akkasumas long-term care facility fi manufacturing plant tilee hinkennama.
Koomishineri Woodbury county Pat Jill filanno June dhaaf bakka filanno 5 akka qopheese hime.
Jill covid-19 hir’isuuf filannoo kuni karaa xallayaatin akka ta’u gochuu jira.
Bakki filannoo qaraa bakka 45 kan jiraniidha: amma bakkewaan 5 kunniinis Riverside Elementary, Long Lines Rec Center, Sergeant Bluff-Luton (lou-tin) High School, the Moville Community Center fii Oto (o-toe) City Hall.
Jill akka jedhetti nama 14,000 kan kalaahan filannoo dhufuu kan dandeene filanoon deebi’ef jira. Magaala Woodbury county kessatti nama 57,000 filachuuf galmaahaniiru. Waraqaa xalayaa kan hafe Juma’aa sa’ati 5pm duraa akka ergamuu.
Filattoonis guyyaa filannoo June 2ffa wayta dhufan akka walirra fagatanii ta’aan gaafatan.
Southern Hills Mall guyyaa Harba banamuudhaf qophayaan. haata’u male gabaan maraa banuuf hin qophofne, yeroon dalagaanis guyyaa Wiyxata hanga Sanbata yoo ta’u sa’aati 11: am – 7pm fi guyyaa gidirdanbata sa’a 12pm hanga 6: pm dha.
Bakki suuqas nama suuqa dhufuuf seera baase jira. Kunni afaan fi funyaan ufii carqiin haguugu fi akka nama baay’en wal hin gene dabalateeti.
Bakki suuqas guyyaatti yeroo baay’e qulqulleesufi disinfection godhuu isaa hime.
Magaala Dakota county dhukubni coronavirus baay’e dabalaa jira
By Fatiya Adam • May 8, 2020
Magaala Dakota county dhukubni coronavirus baay’e dabalaa jira.
Manni fayyaa akka gabaaseti Dakota county keessatti namni haarawa coronavirus qabame 361 yoo ta’u, waliigalti 1,400 gahee jira.
Lakkoofsi kunis kan dhufe erga hojjatota kampani Tyson ka Dakota City kessati argamu qoratan boodaadha.
Magaala Sioux city naannowa metrotti namni du’e 7 gahee jira.
Magaala Woodbury county keessatti namni coronavirus qabame 1,500 taree jira.
Guyyaa Kamsaa kana akka himanitti sababa coronavirus magaala Woodbury county keessati dutti akka
By Fatiya Adam • May 7, 2020
Guyyaa Kamsaa kana akka himanitti sababa coronavirus magaala Woodbury county keessati dutti akka ulgadate dubatan. Namni 3 dabalataan magaala Woodbury county keessatti du’e. Magaala kana keessati ruuhi nama 7 akka bade himame.
Magaala Dakota County namni 2 haarawni du’u gabaasame, waliigalati duti nama 5 gahee jira.
Haata’u malee, oduu coronavirus kan guyyaa dubatte keessati, Iowa governor Kim Reynolds muurtii murteesite san akka Woodbury county keessatti hojiin banamu akka deegartu himte.
Magaala Sioux City metro keessatti namni 2 dabalatan du’uun himame waliigalatii namni du’e 6 gahee
By Fatiya Adam • May 5, 2020
Magaala Sioux City metro keessatti namni 2 dabalatan du’uun himame waliigalatii namni du’e 6 gahee jira.
Duuti tokko magaala Dakota County keessatti kan biraamo Woodbury county keessaayi.
Guyyaa kibxata kutaan Iowa akka gabaaseti gaafa dhukubni jalqabe irraa jalqabe duti amma baayate. Sababa coronavirus irraa kan ka’e guyyaa har’a namni 19 du’uu himame.
Magaala Woodbury county keessatti name haarawni coronavirus qabame 63 yoo ta’u, namni 9 Dakota County keessaayi.